Unogona here kuisa zvinhu zvako mumotokari yako? - Yangu Mota Kunze
Unogona here kuisa zvinhu zvako mumotokari yako?
PaMotokari Yangu Kunze, hatina nyaya newe uchishandisa nzvimbo iri mukati memotokari yako kuchengetedza zvinhu zvako. Iyo yakanaka nzira yekushandisa zvakanyanya iyo nzvimbo iri mukati memudziyo wako wekutakura.
Kana mota yako yasvika kuUnited Kingdom unokwanisa kutora zvinhu zvako kubva mumotokari kuchiteshi kana zvabvisa tsika, kana kubva kunzvimbo yedu.
Mune zvimwe zviitiko, mota haidi kuzouya kwatiri saka nzira yakanakisa yekuziva nezve kupinza mota yako ndeyedu fomu yekukumbira quote.
Tine tarisiro yekupindura chero mibvunzo iwe yaungave unayo pamusoro pekupinzwa kwemotokari yako nekotesiti yakanangana newe.